निर्माणाधीन फास्ट ट्रयाक । फाइल तस्बिर/नयाँ पत्रिका
२०७७ चैत २० शुक्रबार ०६:३९:००
अहिलेको ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी र सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत भएको निष्कर्ष, पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सेनाको नेतृत्वमा बनिरहेको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकमा आर्थिक प्रतिस्पर्धाविना दिन लागिएको २५ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकले फेज टुको ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत भएकाले रद्द गर्न र पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको छ ।
‘काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको टनेल र पुलको इपिसी कन्ट्र्याक प्रि–क्वालिफिकेसन (पिक्यु) प्रकरणका दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को प्रस्तावनाअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिता सुनिश्चित हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएकाले बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको देखिँदा पूर्वयोग्यताका लागि अघि बढाइएको प्याकेज २ (केटिएफटी/आइसिबी/पिक्यु/०७६/०७७–२)को खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमानुसार पूर्वयोग्यताका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भयो,’ समितिले बिहीबार गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।
प्रि–क्वालिफिकेसन भन्नाले प्राविधिक पक्ष मात्रै हो । त्यसका लागि नियमावलीको दफा ३५(२)ले धेरै आवेदनमध्येबाट छान्ने भन्छ । कम्तीमा तीनवटा कम्पनी त छान्नुपर्‍यो नि ! त्यस्तै, खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको परामर्शसमेत लिइएको छैन ।
सेनाले फेज टु को आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि पोली चङ्डा इन्जिनियरिङलाई मात्रै छनोट गरेको थियो । त्यस्तै, फेज वान का लागि पोली चङ्डा र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिजियरिङ छनोट गरिएका थिए । दुवै चाइनिज कम्पनी हुन् । पूर्वयोग्यता छनोटमा फेज वान का लागि २१ र फेज टु का लागि २२ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । दुवै परियोजनामा गरी १०.५९ किलोमिटर लम्बाइका १६ वटा विशेष पुल र ६.४१ किलोमिटरका दुईवटा सुरुङमार्ग बनाउने योजना छ ।
लेखा समितिको बैठकमा सभापति भरतकुमार शाहले सेनाको काम त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६५ को नियम ३५ को उपनियम २ ले आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि धेरै कम्पनी छान्नुपर्ने भने पनि पूर्वयोग्यतामा एउटा मात्र कम्पनी छनोट गरिनु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले प्राविधिक कुरामा हात हालेको होइन, सैद्धान्तिक कुरा मात्रै हेरेको हो । संसद्ले बनाएका ऐन–कानुनअनुसार ठीक छ कि छैन, हामीले त्यही मात्रै हेर्ने हो । त्यो हेर्दाखेर त्रुटि देखिन्छ । प्रि–क्वालिफिकेसन भन्नाले प्राविधिक पक्ष मात्रै हो । त्यसका लागि नियमावलीको दफा ३५(२)ले धेरै आवेदनमध्येबाट छान्ने भन्छ । कम्तीमा तीनवटा त हुनुपर्‍यो नि !’ सभापति शाहले बैठकमा भने ।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले पूर्वयोग्यता छनोट मापदण्डविपरीत र अपारदर्शी रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘फास्ट ट्र्याकको पहिलो र दोस्रो फेजमा २१–२२ वटा आवेदन आएकोमा किन दुईवटालाई मात्रै स्वीकृति दियो ? फेज टु मा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट भएको छ । मापदण्डभन्दा विपरीत, अपारदर्शी देखिएको छ । किन यस्तो भयो ? यसमा सेना किन चुक्यो ? दोस्रो चरणको कामका लागि पहिलो चरणमा योग्य ठानिएको चाइना स्टेट बाहिरएको छ किन ? उसलाई बाहिर राखेर सेनाले दोस्रो चरणका लागि पोली चङ्डालाई योग्य छनोट किन गर्नुपर्‍यो ?’ समिति सदस्य मीना सुब्बाले भनिन् ।
सांसद प्रदीप यादवले ऐन मिचेर काम अघि बढाइएकाले उपसमिति बनाएर थप अध्ययन थाल्नुपर्ने बताए । ‘जुन प्रकारले दु्रतमार्गको काम भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । एउटा उपसमिति बनाएर विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ । एउटामा दुई कम्पनी छ, अर्काेमा एउटा मात्रै छनोट भएको छ । उस्तै काममा एउटै कम्पनी एउटामा पास अर्काेमा फेल छ । ऐन मिचेर काम अघि बढेको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले सेनालाई जिम्मा दिनु गल्ती भयो । सेनालाई ठेकेदार बनाउन खोज्यो सरकारले । सेनाले ठेकेदारी गरेपछि ठेकेदार कहाँ जाने ?’
समितिको प्रश्न : दुई वर्षअघि नै प्रि–क्वालिफिकेसनका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो जुन पछि रद्द गरियो । त्यतिखेर छनोटमा परेको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड अहिले छनोट भएन । तर, पहिला प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट नभएको पोली चङ्डा कम्पनी यसपटक छनोट भयो कसरी ?
सेनाको जवाफ : अहिले दुवै फेजका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन लिमिटेडले प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, फेज वानमा मात्रै मापदण्ड पूरा गरेको थियो । फेज टुमा मापदण्ड पूरा नगरेको हुँदा छनोट भएन । यसबाट पनि आयोजनाले खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक, निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीय, उचित प्रतिफलयुक्त गराउने गरी इमानदारी र जवाफदेहिताका साथ खरिद कार्यको सम्पादन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
समितिको प्रश्न : पूर्वयोग्यता निर्धारणमा फेज वान मा दुई र फेज टुमा एक मात्रै कम्पनी छनोट गरिएका छन् । जब कि दुवै टेन्डरमा पूर्वयोग्यता छनोटका आधार एउटै छन् । यस्तो कसरी भयो ? यो मिलोमतो जस्तो भएन र ?
सेनाको जवाफ : सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३५(१) मा मूल्यांकन समितिले आवेदकले पेस गरेका पूर्वयोग्यतासम्बन्धी कागजपत्रमा योग्यताका आधार पूरा गरे–नगरेको परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सबै आधार पूरा गर्ने आवेदक मात्रै योग्यता परीक्षणमा छनोट भएको मानिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार फेज वान मा सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी क्वालिफाइड भएको कम्पनीले फेज टुमा भने आवश्यक सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकाले नियमानुसार नै अयोग्य हुन गएको हो ।
समितिको प्रश्न : सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मूल मर्म र भावनाविपरीत प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुन नसक्ने अवस्थामा पुनः सूचना आह्वान गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा बोलपत्र आह्वान गरी राज्यलाई ठूलो धनराशि नोक्सान हुने परिस्थिति किन सिर्जना गरियो ?
सेनाको जवाफ : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ मा बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारबाही रद्द गर्ने व्यवस्था छ । तर, सोही दफाको उपदफा (२)को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केही बोलपत्रहरू वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न सकिनेछैन भन्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्थाका कारण बोलपत्र रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न नसकिएको हो ।
अफगानिस्तानका अल्पसंख्यक हिन्दू र शिखलाई भारतले फास्ट ट्रयाकबाट भिसा दिने
तीन वर्षमा फास्ट ट्रयाक सक्न मुस्किल
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा : ‘फास्ट ट्रयाक’ मा बहस सकियो, फैसला कहिले ?